Kutheni ndingenanhlanhla ebomini kunye namadoda?
Yintoni ekhohlakeleyo kunye nendlela yokujongana nayo? Ukuzonwabisa, abaninzi abantu bayazibuza lo mbuzo. Kodwa amanye amantombazana anzima kakhulu. Ngokukodwa abo abasenakufumana isikhulu sabo, umthandi wabo. Kwaye, ukuba badibana nomntu endleleni yabo, ngoko, ngelishwa, ayenjalo. Amantombazana ahluphekileyo ahlupheke, ahlupheke kwaye akaqondi into abayenzayo. Ngokuphindaphindiweyo uzibuze wena kunye nabanye imibuzo enjengokuthi: "Kutheni ndingenanhlanhla ebomini kunye namadoda?", "Yintoni ephosakeleyo kum?", "Yintoni endiyenze ukuba ndiyenze ukugqibelela yam kuphela?" .
Ngelishwa, akukho mpendulo yendalo yonke imibuzo. Emva koko, nganye intombazana iyodwa. Wonke umntu uhlala kunye nemigaqo yabo, imbono ebomini, umxholo wehlabathi elibangqongileyo, banemikhwa yabo, iindawo ezinzima kunye ne "imivumba". Kodwa, ukuba uyigcina ngokucacileyo intsingiselo yolu mbandela, ngoko unokuthatha isiluleko kuwe. Ngoko kutheni kubomi bodwa kubangelwa ukuba omnye umntu kuthi, mhlawumbi kanye, acinge ukuba: "Kutheni ndingenanhlanhla ebomini kunye namadoda?".
Thatha, umzekelo, amantombazana aneminyaka yobudala ukusuka kwiminyaka eyi-13 ukuya kwe-15. Eli lixesha lixesha lokutshintsha ubomi bomntu ngamnye. Xa yonke into ibonakala kwi-prism yokufa. Ukuba kukho into enhle eyenzekayo, yonke into ilungile kuyo yonke indawo, kwaye ukuba yinto embi, ngoko ukuphela kwehlabathi kufikile kwaye kungekudala uMhlaba uza kugubha ebumnyameni. Ngaloo minyaka, amantombazana asengumntwana onobubele kunye nococekileyo, kunokuba abantu abadala abadala banokuzonwabisa. Enye ingxaki enkulu engayi kuba yintlekele. Ngethuba lethu, ngelishwa, ngokuqhelekileyo. Oku kulahlekelwa yintombi. Imimandla yolutsha olutsha lwalolu hlobo lwamaxesha kukho uluvo lokuba kuthathwa njengento engenakulungiswa, oko kukuthi, ukulondoloza ukungabi namacala. Ngoko ke, amaninzi amantombazana, ukuxinwa kwengcinezelo ebanzi yabantwana abaselula, bathathe le nyathelo, bazivelele ekuziphatheni okwenyama nangokwengqondo. Ngenxa yoko, kwikamva, intombazana ingaba lula ukuba neengxaki ekujonganeni namadoda. Ngomntu obusondelene naye, uya kuhlala esoloko engaboni ngokuphindaphindiweyo kwintlungu engathandekiyo kunye nentlungu eyayihamba naye okokuqala.
Kulo nyaka, amantombazana, ngoko kuthetha, "kwinqanaba elibi", ngoko ke abafana abanako ukuwaphulaphula. Eli lixesha lokutshintshwa kwintombazana ukuya kwintombazana. Kwaye, kulo lonke, kufuneka uqale utshintsho. Kubalulekile ukuba utshintshe iincinci zebhinqa kubantwana abadala, i-hairstyle kwaye baqale ukusebenzisa izimonyo. Kodwa oku akuthethi ukuba ufuna ukugqoka iingubo ze-mini, ukukhupha isisu sakho okanye uhlobise njengePapuan. Yonke into ifanele ibe ngokumodareyitha. Kule ngxaki unokuqhagamshelana nomama wakho. Uya kukuxelela kwaye acebise ukuba, njani kunye kunye nento edibeneyo. Kancinci uzilungiselele impilo yabantu abadala. Kwaye kuthiwa ngo-13, ukuba awunathamsanqa nabafana, kusasa kakhulu. Bantombazana abathandekayo, musa ukuzicima ubuntwaneni.
"Ukususela kuma-16 nangaphezulu." Ewe, kunye namakhwenkwe angenakukwazi ukuthwala njengeminyaka eyi-16, nakwe-25. Nangu wena nobuhle, kwaye unobulumko kunye nezandla kuwe igolide, kwaye ayithwali nayo yonke into. Makhe sijonge kwiimeko ezimbini zobomi, uze uzame ukufumanisa ukuba kutheni singenathamsanqa namadoda ebomini.
Inombolo yendawo 1. "Esikolweni ndandingenaso isoka. Ngokuqhelekileyo, ndiyintombazana ethobekileyo, andizange ndihambe ngokuhlwa, ndafunda zonke izifundo. Emva koko ndaya eyunivesithi, ndaza ndahlala kubazali bam kwesinye isixeko. Ubomi bomfundi endandithandayo ngokukhawuleza. Yonke le mibutho, amaqela kunye namaqela awamthanda. Kwelinye la maqela, ndadibana nomfana. Wayebonakala ephuma ephupheni lam, yonke into enhle, umdlali webhola webhola. Ngokuqhelekileyo, ndathandana naye ezindlebeni. Sinobudlelwane. Kukho iintyatyambo, izipho, zonke izinto zihle kangaka, kwanokwenza. Ndamthanda kakhulu kangangokuba ngexesha lokukhululeka ndibhalela i-SMS kuye, ndizinikezela izibongo kwaye, ngezikhathi ezithile, ndamnika amathoyizi ahlukahlukeneyo, iintliziyo kunye namakhadi ngokuvuma. Kodwa ulonwabo aluhlali ixesha elide. Emva kweenyanga ezintandathu zobudlelwane, wandishiya. Uthe wayetyukile kum kwaye wandibuza ukuba ndingabizi kwakhona, ndingabhala kwaye ndingayi kucela iintlanganiso kunye naye ... "
UOksana, oneminyaka eyi-18 ubudala
Ukususela kule ngxelo emfutshane wena, mantombazana amthandayo, kufuneka uzinyamezele ukuba umntu akanakwenza isithixo kwinkwenkwe aze amkhonze njengesithixo. Kufuneka ukuba uhlale ukhuthazwa ukuba akunike izipho, kwaye ungawuzalisi nawo. Ukuba intombazana yakho iyaqonda ukuba intombi yakhe iphelele kuye kwaye ilungele ukulandela yonke imiyalelo yakhe, ngoko uya kuba mnandi kuye, ngoko ke akukho mfuneko. Emva koko, badinga imfumbe efuna ukutyhilwa, intombazana efuna ukufunwa, kwaye akukho mntu uyayinqobayo. Ayeyithandi imizwa engaphezulu, ngesimo samakhulu ama-SMS ngosuku, kunye neeninzi zeeteddy bear ozinikezelwe ngazo kwigumbi labo. Akunamantombazana, kodwa abameli bendoda yesini!
Inombolo yesiko 2. "Siye sadibana iminyaka emibini, njengoko ndakucebisa ukuba ahlale kunye. Wayengekho nxamnye nayo. Ndandithanda ukuhlala kunye kunye. Ndampheka ngokumnandi ukuba adle, ahlambe aze ahlambe iikhati zakhe. Sasilala size siphakamise kunye. Ndade ndidiniwe, akunjalo, ayengenamandla okwaneleyo emva komsebenzi kwaye zonke ezi ziko ziya kwi-salon, kodwa akazange athethe nto kum, oku kuthetha ukuba wayevuya ngayo yonke into. Kuphela nje ukuhamba kwakhe kwexesha elide kunye nokulibazisa emsebenzini emva kwexesha elide laphula i-idyll yethu. Sathetha ngako, kodwa wathi ngenye indlela akunakwenzeka. Emva koko, lo ngumsebenzi wakhe, kwaye ngokubanzi, kodwa uyazama. Ewe, apha ndaxolelaniswa nalo. Kwaye ke, wayiphakamisa izinto zakhe waza washiya omnye umfazi. Emva konyaka babetshatile kwaye sele benomntwana. Kwaye andinakukwazi ukuza kwam "
UKatia, oneminyaka engama-26 ubudala
Thina thina mantombazana sifanele sikhumbule umthetho omnye wegolide ekusebenzelaneni namadoda, awukwazi ukubanyanzelisa ukuba baphile kunye okanye, ngakumbi nakakhulu, uye kwiofisi yokubhalisa! Bayesaba oku njengento ebhaliweyo. Ndiyaqonda kakuhle ukuba kukho amadoda angakwazi ukwenza iingqondo zabo, ngoko bancede kulo, kodwa kuyimfuneko ukunyusa ngobulumko, ngobulumko bentombi, kwaye kungabi ngqo ebunzini. Into yesibili esinokuyinyamezela kule meko kukuba asifanele sibe ngabakhonzi kubo. Ukuhlamba rhoqo, ukucoca kunye nokupheka akuyi kusenza sibe sexier kwaye kuyimfuneko kubo. Ndikholelwe, abayi kubona ukuba uhlamba umgangatho ongekho ngeveki, kodwa kanye ngenyanga. Kungcono ukuchitha eli xesha kwi-manicure okanye ekwenzeni ubuso buso. Ngokuqinisekileyo baya kuyibona. Musa ukuya ekhaya kwindawo yokuhlamba. Gqoka iimpahla ezigxibileyo eziza kugxininisa isidima sakho kwaye zifihlile iimpazamo. Kwaye okwesithathu, ungabi nantloni. Uhambo oluqhelekileyo lwezoshishino kungekho sizathu, kunye nokulibaziseka kwakhe emsebenzini kuze kube sebusuku, kaninzi kunesizathu esifanayo - omnye umfazi. Kodwa ungabi yintetho kunye nokuncedisa umthandi wakho, uthetha ngokunyanisekileyo naye, kwaye xa unokubheka ukunyaniseka kwamazwi akhe. Njengokuba ngaba ngethuba, ukuqinisekiswa.
Sazisa kuphela iimeko ezimbini ezivela ebomini, kodwa zithini ulwazi oluncedo abazisile kuthi! Oku akunjalo konke. Kodwa, ukuba uthabatha ezi ngcebiso kumsebenzi, ke oku kuya kukunceda ekubudlelaneni kwakho kunye nabafana, umbuzo: "Kutheni andinalo inhlanhla ebomini kunye namadoda" aya kutshabalala ngokwawo. Uthande kwaye uthandeke!
Ngaba ufanele ubuyele kwintombi yangaphambili?
Kuthekani ukuba ufunde ngokungcatsha kwintombi yomhlobo?
Ubume bomntu ngewashi ye-biological
Uloyiko njengento yokuqhuba yoluntu
Ijehlwayo njengendlela yokukhulisa abantwana
Ukulungiselela Unyaka Omtsha: indlela yokuwunqoba ngayo yonke imbonakalo yayo engabonakaliyo
Ukupheka okulula kwi-sauerkraut
Buckwheat nge inyama etyongwe kwi-multivark
Iibhola ze-Wedding 2013
Ukuqiniswa kweenwele, ukunakekelwa kweenwele ezihlawulekayo
Umhluzi weemifuno kwi-boiler kabini
Ungayilungiselela njani i-lip balm?
Yimangaliso-rhubarb: zokupheka zangaphambili ze-rhubarb jam
I-Horoscope ngo-Disemba 2017 - Owesifazane-Aquarius - ukusuka eTamara Globa kunye no-Angela Pearl
Indlela yokubilisa isepha ngeoli efunekayo
I-dessert eyenziwe ekhaya eyenza iigourmets - i-pancakes, ihotele kunye nesithombe
Iimpawu ezivakalayo zesikhumba esikhulayo
Ukupheka kwezitya ngeipinashi
I-Asanas yokuqeqesha izitya zomzimba kunye nentloko